အမျိုးသမီးတိုင်းအသုံးပြုသင့်တဲ့ PH Balancing Cleanser! | CosmeticMyanmar
Home » Article » အမျိုးသမီးတိုင်းအသုံးပြုသင့်တဲ့ PH Balancing Cleanser!
အမျိုးသမီးတိုင်းအသုံးပြုသင့်တဲ့ PH Balancing Cleanser!
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်။ ဒီနေ့မှာတော့ ပျိုမေတို့အနေနဲ့ အလေးထား အသုံးပြုသင့်တဲ့ Love Wellness ရဲ့ PH Balancing Cleanser လေးအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ရန်အတွက် ဂရုစိုက်ကြသလိုပဲ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့ မိန်းမကိုယ် သန့်ရှင်းဖို့ကိုလည်း အချိန်ပေးဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ အနံ့ဆိုးများထွက်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ မူမမှန်သော အဖြူဆင်းခြင်းများ ရှိပါက ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်များနဲ့ဆွေးနွေး ပြသသင့်ပါတယ်။ မိန်းမကိုယ် သန့်ရှင်းခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း၊ သားအိမ်ခေါင်းရောဂါများ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် လူတိုင်းလူတိုင်း ဆပ်ပြာတမျိုးမျိုးကို ကိုယ်ခန္ဓာသန့်ရှင်းစေဖို့ရန်အတွက် အသုံးပြုကြပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ မိမိအသုံးပြုတဲ့ ဆပ်ပြာဟာ ဓာတုပါဝင်မှုများတဲ့အခါ ကောင်းတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေ သေဆုံးပြီး မိန်းမကိုယ် ပိုးဝင်ရောက်မှုကို အများဆုံးဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ မိမိ အသုံးပြုမယ့် ဆပ်ပြာတွေဟာ Chemical ပါဝင်မှု နည်းနိုင်သမျှနည်းသော ဆပ်ပြာမျိုးကိုသာ ရွေးခြယ် အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
ဒီ Cleanser လေးမှာ သဘာဝ ပစ္စည်းများကိုသာ အသုံးပြုထားပြီး PH Level ကို ထိန်းညှိပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် နေ့စဉ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်လည်း အနံ့ဆိုးများထွက်ခြင်း၊ ယားယံခြင်းများကို သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဘယ်နေရာသွားသွား ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်တာပေါ့။ အကယ်လို့ မိမိရဲ့ အသားအရေက ဓာတ်မတည့်မှု များတဲ့အတွက်ကြောင့် မသုံးရဲရင်တော့ လက်ဖမိုး ဒါမှမဟုတ် လက်ဖျံတို့ပေါ်မှာ စမ်းသမ်းအသုံးပြုပြီး မှ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် $ 30 ကျသင့်ပြီး Branded Online Shop တို့နဲ့ ချိတ်ဆက်မှာယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
Image Source: https://lovewellness.co
စွဲမက်စရာကောင်းတဲ့ နှုတ်ခမ်းသားလေးကို Bite Mask နဲ့ ဖန်တီးလိုက်ရအောင်…..
Givenchy ရဲ့ အလန်းစား Makeup Remover!
Tags: balancing cleanser